CAGAARSHOW BORIC EE XANUUNKA DHEGAHA: TILMAAMAHA LOOGU TALAGALAY ISTICMAALKA DAAWEYNTA OTITIS MEDIA, IYO HADDII QALABKAN UU KU CAAWIN DOONO IYO SIDA AY U SHAQEYSO? - WIXII MARTIDA
Badanaa, takhaatiirta leh cudurrada dhegta ah waxay qoraan qamriga boric ama boric acid dhegta. Dhibaatooyinka dhagaha, boric acid waa caawiye lagama maarmaan ah oo leh sifooyin qumman.
Habkan waxaa loo isticmaalaa daawada muddo dheer waxayna leedahay qaabab wanaagsan. Otitis waa geedi-socod barar ah oo ka dhacaya dhegta. Isaga oo uu keeno raaxo xanuun iyo xoog leh. Dadka ku dhawaadba da 'kasta waxay saamayn karaan. Tirakoobyada sare ee kiisaska waxay ku dhacaan carruurta da'doodu u dhaxayso 1 ilaa 3 sano.
Calaamadaha otomaatikada ee qof walba way ka duwanaan karaan oo dareemaan si kala duwan.
Calaamadaha ugu horeeya ee otomaatikada waxaa ka mid ah:
dareemidda ciriiriga dhegta;
bararka dhegta dibadda;
qanjidhada qanjidhada oo barara;
dheecaan ka soo baxa dhegta;
Calaamadaha cudur-sidaha ayaa si dhakhso ah u muuqan kara, macno ahaan hal maalin, oo si tartiib ah, illaa toddobaad. Sidaa darteed, badanaa way adag tahay in la ogaado marxaladaha hore iyo qaadashada tallaabooyinka habboon.
Si loo fahmo otitis-ka bukaanka ama maahan, waa in aad wax yar ku cadaadisaa dhejiska (xajmiga saddex-geeska ah ee dhegta dibadda). Xilliga cudurka "otitis", bukaanku wuxuu la kulmi doonaa xanuun.. Haddii aan wax ka qabanno cudur kale, xanuunka xanuunka lama ogaanayo.
Maxaa la dooranayaa?
Calaamadaha xanuunka leh ee ay la kulmaan qof qaba cudur-sidaha, wuxuu la-talin doonaa dhakhtarka. Iyadoo la raacaysa daawooyinka kale ee ku qoran warqadda qoraalka ah ee qori-qore ah, boric acid ama boric acid waa hubaa in la helo.
Daaweynta Otitis-ka habkan waxaa loo yaqaanaa awowgayaga, laakiin sanadihii la soo dhaafay ma noqon mid waxtar leh. Waa kuwee daroogooyinka la doorto?
Alkiska Boric - Tani waa xal khamriga ah ee boric acid, horay u diyaarsanaa isticmaalka. Waxa uu udhexeeyaa saamiga daweynta ee ugu fiican. Bukaanku wuxuu kaliya u baahan yahay inuu soo iibsado dhalo isla markaana lagu aaso xalka dhegaha marka loo eego talooyinka dhaqtarka.
Boric acid. Waxaad u iibsataa budada cad. Ka hor intaadan isticmaalin, waa in lagu qasi karaa biyo ama aalkolo.
Xulo inta u dhaxaysa boric acid iyo boroski boric ah si aad u noqoto dhakhtarka. Inkastoo aashito ay noqon karto mid wax ku ool ah, alkoolka boricigu waa ka badbaado. Is-daaweynta otisku waa mid aan loo baahnayn, laakiin haddii ay sabab u tahay booqashada dhakhtarka ee mustaqbalka dhow waa mid aan suurtagal ahayn, waa inaad doorataa xalka borogaraamka.
Xaalad kasta ha ku xad gudbin jumladaha ku qoran liistada. Haddii kale, halkii aad saameyn lahayd antiseptic, waxaad heli kartaa gubasho daran.
Sidee ayuu daawada u shaqeynayaa?
Xalka boric acid waxaa caadiyan loo isticmaalaa xanuunka maqalka.. Waxay leedahay saameyn liddi ku ah antiseptic waxayna caawineysaa in laga bogsado.
Haddii ay dhacdo qadar aan habooneyn ee gubashada, gubo xuubka xuubka iyo xuubka. Boric acid waxay saameyn xun ku leedahay qaabdhismeedka unugyada jirrooyinka keena otis. Wuxuu burburiyaa borotiinka iyo jaakadaha bakteeriyada. Xalka wuxuu ku ururaa jirka waxaana si buuxda looga tirtirayaa shan maalmood ka dib joojinta.
Boric acid oo lagu qasi jiray biyaha ama aalkoladu waa daaweyn gaar ah oo loogu talagalay otis iyo cudurrada kale ee dhegta.
Faa'iidada cad ee daaweynta boric acid:
saameyn liddi ku ah antiseptic;
saameynta qalajinta ayaa aad muhiim ugu ah geedi socodka bararka nadiifinta;
Saamaynta kululaynta waxay ka caawisaa sidii loola dagaallami lahaa cudurrada faafa ee kala duwan;
helitaanka, qiimaha hooseeya.
Daaweyntu waxay si xun u saamayn kartaa jirka haweenka uurka leh iyo carruurta yaryar ilaa 3 sano. Sidaa darteed, kahor isticmaalka, ma noqon doonto mid aad u macquul ah si aad ula tashato dhakhtar otolaryar ah oo caddeeyo qiyaasta.
Sida daroogooyinka oo dhan, boric acid waa ka hortag:
xilliga uurka iyo nuujinta;
dulqaadka shakhsiyeed ee boric acid;
laguma talinayo carruurta ka yar 3 sano.
Waxaa haboon in la xusuusto in boric acid uu yahay walax sun ah, sidaa darteed, marka aad codsaneyso, waa inaad si taxadar leh u dhageysataa jirkaaga. Dhibaatooyinka ugu yarna isla markiiba la tasho dhakhtar.
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka otomaatiga
Habka ugu caansan ee loo isticmaalo daawada haddii ay dhacdo in xubinta maqalka ay tahay mid aad u kacsan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr siyaabood oo kale oo waxtar leh oo aad ka warqabto.
Trundochka. Trunda waa tampon gaar ah oo aan lagama maarmaan u tahay nabarada maqaarka iyo cudurrada kale ee dhegaha. Waxaa si fudud loo sameeyaa, waxayna keenaysaa faa'iido weyn. Si aad u sameysid farsamo waxaa lagama maarmaan ah in la qaato gabal yar oo suuf ah oo saafi ah, si khafiif ah ugu faafi gacmahaaga. Isku duub qalooca leh dhexdhexaad ah oo ah 1-2 millimitir, duuduubka kala badh, ku qoyso xal boric acid ah iyo gali gudaha godka dhegta bukaanka. Trunda waa inuu jiraa ilaa uu xalliyo.
Adkeysiga. Si aad u sameysid cadaadiska alkolada boroje, waxaad marka hore u baahan tahay inaad diyaariso dhowr qaybood. Dawada aan si toos ah ugu dhejin doono dhegta. Ku qooji tampons diyaar u ah xal of boric acid iyo si adag u dheji xuubka dhegta. Dabool dhegta suufka ama faashadda iyo faashad faashad leh. Ka saar cadaadiska ka dib 2.5 - 3 saacadood.
Buryeyn. Ka hor inta aanad qodin xalka boric acid, dhegtu waa in marka hore la nadiifiyaa suufka suufka iyo dheecaanka kale ee dabiiciga ah ee otista. Bukaan-socodka jiifsanaya dhinaca, si loogu sii galo daawada daroogada, wax yar ka dib dib u dhigga dhegta. Qof qaangaar ah wuxuu u baahan yahay inuu ku daro wax ka badan 4 dhibcood dhegta xanuun. Ku celceli habka waa in uu ahaado 3-4 saacadood kasta.
Goorma ayaan filan karaa soo kabashada?
Otitis waa barar october, waxay leedahay qaabab badan, sidaa daraadeed waxa suurtagal ah in la sheego inta qofku jiran yahay. Macluumaadka noocan oo kale ah ayaa ku siin kara oo keliya dhakhtarka ENT ee keena bukaanka. Carruurta iyo dadka waaweynba, cudurka ayaa si siman u kordha.
Si kastaba ha ahaatee jirka jirkoodu yar yahay si dhakhso ah uma qabsan karo cudurka. Sidaa daraadeed, caruurtu waxay sii socdaan muddo dheer. Oo iyana way ka sii darnaan lahaayeen. Celcelis ahaan, heerka wajiga ah ee cudurku wuxuu socdaa 3 ilaa 5 maalmood. Kiisaska ugu sareeya illaa toddobaad.
Soo kabsasho buuxda waa in la filaa wax ka hor 7 maalmood ka dib calaamadaha ugu horeeya iyo daaweynta waqtigeeda.
Dhibaatooyinka kale ee daaweynta
Dhibaatooyinka kale ee la adeegsanayo daroogada ayaa aan la ogaan. Isla markiiba ka dib marka la geliyo ama la geliyo tampon, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo raaxo darro, cuncun ama dareen yar oo gubanaya. Laakiin ka dib daqiiqado ka dib way dhaaftaa.
Haddii ay dhacdo xaddi badan, sarkhaantu waa la arki karaa, calaamadaha taas oo ah:
carqaladaynta nidaamka dareemayaasha;
Otitis, sida cudur kasta oo kale, way sahlan tahay in laga hortago in la daaweeyo. Ma noqon doonto mid aad u adag in la bilaabo xoojinta difaacida iyo ilaalinta adag ee sharciyada nadaafadda shakhsi ahaaneed. Iska ilaali hypothermia. Daryeelka dabiiciga ah, ha dayicin imtixaanaadka dhakhtarka ilkaha.
Ka-hortagga waraabowga maqaarka waxaa ka mid ah hababka daaweynta guud ee looga hortagayo hargabka iyo xoojinta nidaamka difaaca, iyo sidoo kale kuwa gaarka ah, sida saxda ah ee sanka, nadiifinta sanka, iwm.
Otitis waa cudur halis ah. Waxay noqon laheyd mid la yaab leh in la rumaysto in ay iska gudbi doonto. Marka calaamadaha ugu horreeya ee otisku soo baxaan, waa inaad la tashataa takhtar.. Is-daaweyntu waa mid aad u adag oo leh dhibaatooyin. Carruurta, oo aan si buuxda loogu daaweyn otuunta ayaa ku kordhi kara qaab dabacsan. Iska ilaali caafimaadkaaga oo ha dayicin daryeel caafimaad!